I-Fed iseta ikhosi yeemarike zentengiso | Ezezimali
Ukuvela kweemarike zezabelo zamashishini ezingenanzala emisiweyo kwaphawulwa ziingxelo zenkokeli ephezulu yeFederal Reserve yaseMelika malunga nendlela Ukuvela kwamazinga enzala ukususela ngoku ukuya phambili. Emva komgaqo-nkqubo wobundlongondlongo ngoDisemba wabangela ukwehla okukhoyo ngoku phakathi kweearhente zezemali. Ukuvala kunyaka ophelileyo kumanqanaba asezantsi kunye nethemba lolu hlobo lweemarike zezemali.
Ewe, ingxelo entsha evela kumzimba wezemali waseMelika ibonisa ukuba iya kuba nakho ukuziqhelanisa neemeko ezintsha ezinokuvela kuqoqosho. Ngokukodwa, bathe baya kuba bhetyebhetye ngakumbi kunangoku ekunyukeni okubonakalayo kwenqanaba lenzala. Ukubonisa ukuba inqanaba layo likwazile ukufikelela kumanqanaba afunwayo. Ngokufanelekileyo, phakathi kwamanqaku ama-2 no-2,50 esisiseko, kodwa ngaphandle kokungena kolu nyuko lunexhala kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela.
Njengomphumo wale meko intsha kumgaqo-nkqubo wezemali waseMelika, impendulo kwiimarike ze-equity khange kube kudala iza. Ukunyuka kwe-indices zesitokhwe kuye kwanzima kakhulu kwaye kubonakala ngathi ithemba elithile ifakiwe kwizigqibo zabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngokonyuka kwezinye iimeko kuye kwafikelelwa kumanqanaba e-5% kwiintsuku ezimbalwa zorhwebo.
1 I-FED yenza ukuba i-Ibex 35 isabele
2 Uloyiko lokudodobala koqoqosho kwihlabathi liphela
3 Yintoni enokwenziwa kwezi nyanga?
4 Utyalomali oluxubileyo
5 Ingaba ngumgibe kwiimarike
I-FED yenza ukuba i-Ibex 35 isabele
Impendulo kwezi ntsuku zokuqala yale intsha iye yanika ithemba kakhulu kwisalathiso esikhethiweyo kwii-equities zesizwe. Ukuya kwinqanaba lokugqitha kwinkxaso ebalulekileyo yokuba Ibex 35 ngamanqaku ayi-8.700 8.300 kwaye emva kokufumana amanqaku ayi-XNUMX. Ibizezona zixabiso licandelo lebhanki zikhokelele kolu nyuso. Alinakulityalwa into yokuba ikwayeyona nkampani ichaphazelekileyo kunyaka-mali odlulileyo.
Kwelinye icala, oku khawulezani Oku kwenzeka kwinyanga yokuqala yonyaka kungakhokelela kumanqanaba aphezulu ekwakhiweni kwamaxabiso ezabelo. Nangona kunjalo, umbuzo omkhulu ophakanyiswe ngabahlalutyi beemarike zezemali kukuba ingaba ezi ntshukumo kwimarike yemasheya ziya kuthi ngqo okanye ukuba, ngokuchaseneyo, zinokwandiswa phakathi enyakeni. Ngayiphi na imeko, ukuthandabuza yinto exhaphake uninzi lweengcali kwezi asethi zemali.
Kwimeko nayiphi na into, kwiimarike ze-equity kukho umngcipheko wokuba kuya kubakho qoqosho Ukufaneleka okukhethekileyo. Ngaphandle kwenyani yokuba ukusukela kwi-FED kuye kwanefuthe lokuba ezi zimvo zingalunganga ziphambi kwedatha ye-macroeconomic ethi inikwe kwiinyanga ezidlulileyo. Ngayiphi na imeko, yimeko apho abatyali zimali abancinci nabaphakathi kuya kufuneka baphile kula maxesha ngqo. Kuba banokulahlekelwa yimali eninzi ekusebenzeni kwabo kwiimarike zezemali kwaye bekungekho enye indlela ngaphandle kokukhusela imali ekhoyo yokutyala imali.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba idatha yakutsha kunye nezalathi zoqoqosho lwaseTshayina azilunganga. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba babhengeza Ukuncipha kwinqanaba lokukhula kumacandelo abo avelisayo. Ngale ndlela, akukho khetho ngaphandle kokujonga kakhulu ukuvela kwezi paramitha zoqoqosho ukumisela ukuba lixesha elifanelekileyo na lokuthenga izabelo okanye ukuba ngokuchaseneyo kungcono ukuba kwimeko yolwelo ukuze uzikhusele uninzi lweemeko zentengiso ezingahambelaniyo nengeniso eyahlukileyo. Ngokukodwa, ngenxa yokuguquguquka okukhulu okungafakwa kwixabiso lokhuseleko.
Yintoni enokwenziwa kwezi nyanga?
Isicwangciso sokujongana neentsuku zokuqala zonyaka omtsha asikokuziveza ngokuthe ngqo kwiimarike zezabelo. Ngale ndlela, umbono ogqwesileyo unokusekwa ekuqeshweni kwemali ethile. Uhlobo lweemveliso lubanzi kakhulu kwaye ke unokusebenzisa amanye amacandelo alo.
Kukhethekile, ukuba utyalo-mali luza kujoliswa kwi ixesha eliphakathi nelide, kwiprofayile yotyalomali echazwe kakuhle: umsebenzisi okhuselayo ongafuni kugxila kulondolozo lwakhe kwiimveliso zebhanki zesiko. Umzekelo, iidipozithi zexesha elimisiweyo, amanqaku eshishini kunye neeakhawunti ezihlawula kakhulu.
Isiphakamiso esisebenzayo xa oku kunyuka kugcinwa kwimarike yemasheya kuboniswa yimali yotyalo mali esekwe kwii-equity. Ngabo banokubonakaliswa Iimarike zezabelo, zombini kwiimarike zikazwelonke nezamazwe aphesheya. Ukuze ngale ndlela, uhlukanise ukonga kwakho kwaye akufuneki uzilinganisele kwintengiso enye okanye kukhuseleko olunye. Nangona olu didi lwemisebenzi luza kuthwala umngcipheko omkhulu ngenxa yokungazinzi kwezi marike zezimali.
Ngayiphi na imeko, ukuba awufuni kuziveza ngokungaphezulu kwimarike yemasheya, enye yeendlela ezilungileyo onokukhetha kuzo yenziwa ngemali exubeneyo. Akumangalisi ke ukuba ngabo dibanisa iiasethi ezahlukeneyo zemali, ezinje ngobulungisa kunye neziphumo zengeniso esisigxina. Ngobungakanani obunokwahluka ngokuxhomekeke kwinqanaba lomngcipheko abatyali mali ngokwabo abanqwenela ukujongana nawo. Zizona mveliso zintle zokunciphisa umngcipheko kwaye zibekho kwezona marike zezimali zichaphazelekayo. Ngeefomathi zazo zonke iintlobo kunye nendalo. Kwimeko kaxakeka ecacileyo kwimfuno yabasebenzisi bezimali ngokulula kweemodeli zabo zesivumelwano.
Ingaba ngumgibe kwiimarike
Ngayiphi na imeko, sukukhathalelwa lithemba kwintengiso yesitokhwe kwezi ntsuku zokuqala zonyaka. Isenokuba yifayile ye- Umgibe we-bullish Ukutsala inani elikhulu labatyali mali abancinci nabaphakathi. Olona nyango lokufumanisa kukuba i-Ibex 35 ingagqitha ngokwaneleyo inqanaba lamanqaku ayi-9.200 kwaye inokunika umqondiso ocacileyo wokuthenga ngee-equities zaseSpain. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye kwanakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » I-FED ibeka ikhosi kwiimarike zamasheya